Dubai City waa meel la yaab leh! | Jacayl ka yimid Imaaraadka!
Dubai City waa meel la yaab leh!
Socdaalka shaqo ee ugaarsiga
Sheikh Mohammed bin Rashiid Al Maktoum oo ah Muwaadiniin Muhiim ah
Published by Shirkadda Dubai City at June 11, 2019
Dubai Magaalada waa wax la yaab leh Place!
Shirkadda Dubai City marwalba waxaan fiirineynaa inaan horay usameyno oo aan cusbooneysiinno xubnaheena cusub ee diiwaangashan wararka ka socda Bariga Dhexe. Marka, waxaan dhajinaynaa aflaan, sawirro iyo macluumaad ku saabsan Dubai City. Waxaan nahay Dubai Lovers ujeedkeenuna waa inaan sare u qaadno Imaaraadka Carabta Emirates.
Kooxdayadu marwalba waxay raadineysaa inay horumariso Emirates. Waxaan had iyo jeer siinaa booqdeyaasha fursad ay wax ku bartaan ku saabsan UAE Nolol-maalmeedka, Kordhinta Guides Dubai iyo Shirkadda Dubai City ⭐⭐⭐⭐⭐ kooxda baloogyada wax ka qora ee raadinaya inay bixiyaan fursadaha ugu fiican ee khadka tooska ah iyo macluumaadka afarta akhristayaasha caalamiga ah.
Xitaa mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan Bollywoodka Shah Rukh Khan Wuu kuwa raacsan iyada oo Hab nololeedka Dubai. Iyo maadaama uu yahay kan dadka kale ku casuumay Dubai. Waxaa intaa dheer, Hindida kaliya isaga jeclaada isaga bogagga warbaahinta bulshada.
Xukuumaddu waxa ay ku guulaysatay inay booqato Mumbai oo ay ka dhigto qofkan cajiibka ah inuu siiyo meelaha uu jecel yahay iyo saamiyada ku saabsan hab nololeedka Dubai.
Sidaas, waa aad be martigeena gudaha UAE? Waa inaad baadho Dubai dareenka Bollywoodka. Xogtaada, ololaha iyo goobtan dawladeed waxaa haya Shirkadda Dubai Suuq-geynta Dalxiiska & Ganacsiga. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay filimada!
Magaaladayaga la yaabka leh ee Dubai waxay ku taal xeebta Bari ee Jasiiradda Carbeed. Qaybta ugu badana waxay ku taal geeska koonfur-galbeed ee Gacanka Carbeed. Magaalada Dubai aad ayaa loo yaqaan Hindida iyo Pakistani dadka. Iyo sidoo kale dalxiisayaasha caalamiga ah dhamaantood Europe iyo US Dubai oo leh garoon diirimaad leh oo caan ah iyo hidaha dhaqanka ee hodanka ah ee booqdayaasha cusub ee ka kala yimid adduunka. Intaa waxaa dheer, dadka maxalliga ah ee ku nool 7th Emirates waxay soo dhaweynayaan booqda kasta oo cusub. Sababtoo ah waa kuwo aad u deeqsinimo badan qaabkooda ay ku leeyihiin soo-booqdeyaal cusub oo ku yaal Dubai City.
Magaalada Dubai, waxaan ku jirnaa maalmo sanadeed ah 356. Dhanka kale, xiisaha safar lama filaan ah halkaas oo aad ku heli kartid wakhti fiican. Dabcan, Dubai waxay leedahay xeebo qurux badan oo leh hudheelo qurux badan iyo dukaamada waawayn ee waawayn oo soo jiidasho leh 21st-qarnigii xiisaha lahaa. Waxa kale oo jira mid ka mid ah kuwa ugu fiican ganacsi bulshada adduunka. Magaalada caasimada ah United Arab Emirates waxay heshaa malaayiin maalgashi iyo mashaariic cusub sanad walbo. Iyadoo tanna maskaxda lagu hayo, firaaqada iyo booqdayaasha ganacsiga ee u safraya Imaaraatka sanad walba adduunka oo dhan.
Waa maxay sababta Dubai mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican adduunka?
Waa in la xasuustaa in lacagta dalka ay tahay dirham, oo aan ahayn doolarka Mareykanka. Laakiin waa ku filan tahay sababtoo ah haddii aan is barbardhigo AED 3.87 illaa USD 1. Waxay u muuqataa sida fikradda caqli-gal ah in ay timaaddo oo waqti wakhti la qaato iyaga oo leh wadan sidan oo dulqaad leh sida dadka Dubai.
Imaaraadka Carabta iyo Iskuduwaha dalka oo dhan iyo kuwa soo booqanaya oo dhan ayaa ka badan soo dhaweyn kara inay booqdaan meeshan oo ay eegaan sida ay Emirates-ka ufaraxsani dhab ahaantii u socoto farsamada. Si kastaba ha ahaatee diinta Islaamku wali waa qaab hab nololeed ee Dubai. Dhinaca xun, dalxiisayaasha aan waligood ku jirin Emirates waa in ay qaataan heer go'an oo dhaqan iyo diimeed diimeed muddada fasaxooda.
Faahfaahinta Magaalada Dubai
Imaaraadka Imaaraadka Carabta, waxaan ka heli karnaa khilaafyo badan marka loo eego Europe. Tusaale ahaan, Dubai Rulers Maareynta meeshan tan iyo markii ay 1833 iyo Al Maktoum boqortooyadii boqortooyadu ku xukuntay Dubai tan iyo markaas. Emirates ayaa had iyo jeer horumar ka sameeya. Boqorka Dubai waa qof caqli leh oo hogaaminaya hab horumarineed oo lagu hormarinaayo maamulayaasha hogaaminta ee Dubai. Tan iyo markaas Dubai waxay noqotay xarun ganacsi iyo dalxiis ee gobolka Khaliijka. The Taariikhda Dubai ma aha wax sahlan, bilawgii xubnihii 800 ee qabiilka Bani Yas, oo uu hoggaaminayey Qoyska Maktoum, ayaa degay dhoobada afkeeda 1833. Sidaa daraadeed, bilowgii wuxuu ahaa mid aad u adag oo ku saabsan qarannimada Carabta. Doonta ayaa ah deked dabiici ah isla markaana Dubai ay dhawaan noqotay xarun loogu talagalay kalluumeysiga, ganacsiga badeecadda iyo badda.
Sida aan ku wada aragno TV-ga tobanaan sanno ee la soo dhaafay gobolka Khaliijka ayaa loogu duceeyey Emirates. Dadka ajaanibta ah iyo dadka deegaanka waxay arkeen kobcitaan aan caadi ahayn dhammaan qaybaha dhaqaalaha Dubai. Dawlada 7th Emirate ayaa si adag u shaqaynaysa, si joogta ahna u shaqeyneysa si ay u hagaajiso nolosha muwaadiniinteeda. Imaaraadka Imaaraadka Carabta waa ganacsi diyaar u ah xitaa kor u kaca iyo soo saaro sharciyo firfircoon oo ka caawiya horumarinta wadamada. Dhismaha shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa si weyn u soconaya.
Markaad heeso la gasho shirkaddeena oo aad furatid akoonkaaga. Waxaad fursad u heli doontaa inaad kula xiriirto dadka kale ee ka socda Imaaraatka iyo Qatar, Saudi Arabia iyo xataa Hindiya. Sidaas, fadlan hubi inaad bilaabi doontid diiwaangelinta shirkadeena. Ka dibna la xiriir shirkadaha kale ee UAE.
Shirkadda Dubai City oo hadda bixisa talooyin wanaagsan oo loogu talagalay Shaqooyinka magaalada Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.
2 Faallada faalaha
0 Jawaabaha jawaabta
Inta badan faallooyinka la faalleeyay
Jawaabtii ugu xiisaha badnayd
0 Qorayaasha faallooyinka
Qoraalkii ugu dambeeyay ee qoraaga